एकल गायनमा सुमन
नारी संवाददाता , श्रावण ४, २०७६
लामो समयदेखि सांगीतिक क्षेक्रमा सत्रिय गायक सुमनकुमार श्रेष्ठ शनिबार काठमाडौंमा पहिलो पटक एकल गायन कार्यक्रममा झुल्किए । आधा दर्जन वाद्यवादक संगीतकर्मीसहित प्रस्तुत भएका गायक सुमन कुमारले त्यो अवधिमा आफ्ना लोकप्रिय गीत–संगीत प्रस्तुत गरे । -- पुरै पढ्नुहोस् --
सम्पदा प्रवर्द्धनमा हेरिटेज अफ फेसन नेपाल
नेपालमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै तिनको प्रवर्द्धन गर्न पोखरामा आगामी अगस्ट २ (साउन १७ गते) मा ‘हेरिटेज अफ फेसन नेपाल’ शीर्षकको फेसन शो हुने भएको छ । एएसएपीले आयोजना गर्न लागेको उक्त शो अस्ट्रेलियामा समेत प्रस्तुत गरिने बताइएको छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --
गायिका ज्योति मगरले हङकङेली दर्शकहरूलाई छमछमी नचाएकी छिन् । बालबालिका तथा महिलाहरूका लागि शिक्षा सहयोगी फाउन्डेसन नेपालको सहयोगार्थ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ज्योतिसँगै डान्सर सुस्मिता शाही, गायक राज तामाङ तथा गायिका हर्षिका आले मगरले पनि विभिन्न प्रस्तुति दिएका थिए । -- पुरै पढ्नुहोस् --
साउन महिनामा के खाने ?
प्रा.डा. वीणा पौड्याल, संस्कृतिविद्, श्रावण ३, २०७६
यो एक महिना धेरैले माछामासु खाँदैनन् । वैष्णवहरुको विशेष महिना भएकाले मासु खाँदैनन् । आयुर्वेदले पाचन शक्ति कम हुने महिना भनेको छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --
नारी संवाददाता , श्रावण ३, २०७६
युरोपको लात्भिया राज्यको रिगामा आयोजना हुने ‘मिस एलिट ब्युटी क्वीन २०१९’मा नेपालको प्रतिनिधित्व भावना मल्ल ठकुरीले गर्ने भएकी छन् । ४० देशका सुन्दरीको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा उनी मात्र नेपालको एक्लो सहभागी हुन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
गायिका प्रमिलाको तीज गीत
गायिका प्रमिला पुनले यो वर्षका लागि आफ्नो तीज गीत सार्वजनिक गरेकी छिन् । ‘तिजै आयो’ बोलको सार्वजनिक गीतमा गायिका स्वयमः कै शब्द तथा संगीत रहेको छ । गीतमा संगीत संयोजन भने कृष्ण पुनले गरेका छन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
हेल्थ एन्ड एजुकेसन फाउन्डेसन
नारी संवाददाता , श्रावण २, २०७६
प्रो.डा. मथुरा केसीले गत महिना आफ्नो जन्मस्थान पाल्पाको ताहुँमा प्रो. डा. मथुरा केसी हेल्थ एन्ड एजुकेसन फाउन्डेसन स्थापना गरेका छन् । आफ्नै १ करोड रकम सिड मनी राखेर सुरु गरिएको उक्त फाउन्डेसनको शिलान्यास स्थानीय वृद्ध महिलाले गरेकी थिइन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
आइलाइनर र आइस्याडो मात्र होइन बजारमा एलो ब्लु, पिंकदेखि ग्रिन सेडसम्मका मस्कारा उपलब्ध छन् । यस्तोमा नियमित ब्ल्याक र ट्रान्सपरेन्ट सेडका मस्काराबाट बोर भएको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा कलरफूल मस्कारा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मस्काराको कलरफूल सेड्सले आँखालाई ठूलो देखाउनुका साथै ब्राइट लुकसमेत प्रदान गर्छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --